Roland Ratsiraka : Tsy nisy nifidy tokoa ve? -
AccueilSongandinaRoland Ratsiraka : Tsy nisy nifidy tokoa ve?
Tsy nahazo afa-tsy 0,43% tokoa ve ny kandidà Roland Ratsiraka nandritra ny fihodinana voalohany kanefa niaraha-nahita ireny vahoaka maro be nanara-dia azy nandritra ny fihodinana voalohany ireny? Tena tsy nisy nifidy an’ity kandidà ity tokoa ve izany?
Mipetraka tokoa ny fanontaniana ankehitriny rehefa mahita ny hetsika etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai manao hoe: “sahy milaza ve ny CENI sy ny governemanta MAPAR fa tsy nisy hala-bato faobe nanomboka tany amin’ny fihodinana voalohany hatramin’iny fihodinana faharoa iny raha io isan-jato azon’ny kandidà Roland Ratsiraka io fotsiny no dinihina? Manaiky tokoa ve ity kandidà ity fa tena ireo marina no mba nifidy azy?”.
Sarotra inoana io tarehimarika 0,43% azon’ny kandidà Roland Ratsiraka io, ary izay indrindra no ilazan’ny KMMR sy ny “Legal Team” fa tena nisy tokoa ny hosoka sy hala-bato nanomboka tany amin’ny fihodinana voalohany, ary manana porofo maro be momba izany rahateo koa izy ireo tamin’iny fihodinana faharoa iny izay nokasaina haseho vahoaka tetsy amin’ny kianjan’ny 13Mai, kanefa dia iny niaraha-nahita iny ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Prefektoran’ny tanàna.
Tsy ny kandidà laharana-25 irery araka izany no voakasik’ity hosoka sy hala-bato ity. Ilay tontolon’ny fifidianana eto amintsika mihitsy no marary ilàna fanasitranana hisorohana ny krizy miverimberina eto amin’ny firenena. Mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe: “mbola manana hambom-po ve ny mpanao politika eto amintsika, ary tena tia tanindrazana marina tokoa ve?”. 0,43% sisa ve izany no mba nifidy ny kandidà Roland Ratsiraka izay nanana fanantenana ary niomana mafy tokoa tamin’ity fifidianana filoham-pirenena ity?